Repoblika Dominikana: Ho voavaha ve ny olan’ny delestazy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2009 21:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
Isaky ny faha-16 Aogositra any amin'ny Repoblika Dominikana, dia fahazaran'ny governemanta amin'io daty io satria feno indray ny taona niasany, ny fanoloan'ny filoha Leonel Fernández ny mpikambana sasantsasany ao amin'ny governemantany. Tsy dia nisy loatra ny fanovana lehibe, fa nisy kosa ny iray izay niteraka adihevitra. Ny filoha lefitry ny Orinasam-panjakana misahana ny Jiro Dominikana [es] (CDEEE ny fanombohan'anarany amin'ny teny espaniola), ny InjenieraRadhamés Segura dia nasolo olo-malaza avy amin'ny orinasa tsy miakina, izay ny mpandraharaha Celso Marranzini izany. Ao amin'ny bolongany Duarte 101 [es], Joan Guerrero no manoratra ny mombamomba ity mpikambana vaovao ity:
Tonga i Celso. Toy ny vahiny tsy nampoizina, niteraka resabe tamin'ny filazam-baovao isan-karazany ity fanendrena vaovao nataon'ny filoha Fernández azy ity.
Fiainana isan'andro aty amin'ny Repoblika Dominikana ny delestazy, ary lazaina matetika fa io no iray amin'ny sakana lehibe amin'ny tetikasam-pampandrosoana. Ankoatra izany, be dia be ny fanampiana efa nataon'ny fanjakana tamin'ny sehatry ny angovo. Efa nihoatra ny 40 taona izay no nisian'ny delestazy, ary efa nandramana avokoa ny karazam-bahaolana rehetra. Tsy nisy nahomby izany rehetra izany mandraka androany. Manontany tena ny maro raha hahatsara zavatra kokoa ny fanendrena an'i Marranzini.
Saripikan'i Señor Adventure ary voaaron'ny dinan'ny Creative Commons.
Maro no nihevitra fa tsy dia nampisalasala loatra ny nanesorana an'i Segura rehefa tonga ny fotoana nilazan'ny filoha Fernández ny fanovana ny saantsasany ao amin'ny governemantany. Raha fotoriana manko dia mitoetra ho anisan'ny lafo indrindra ny vidin-jiro isaky ny kilowatt-ndry zareo eo amin'ny faritra misy azy ary eo ihany koa ny lazan'ny kiantranoantrano sy ny kolikoly malaza ao anatin'ny sehatra ary dia fantatra fa efa voaisa ny itoeran'i Segura eo amin'ny toerany. Fa rehefa niseho ny fanovana dia vitsy ny nieritreritra fa ny iray amin'ny tena mpitsikera azy, dia i Marranzini, izay nitondra ny karazana fanambarana amin'ny anaran'ny sehatra tsy miankina nandritra ny herinandro vitsivitsy mitsikera ny tsy fahaizan'y ekipan'i Segura mitantana sy ny tsy nahavoavahany ny olan'ny delestazy, no haka ny toerany.
Ho an'ny sasany dia misy tanjoona roa ao anatin'ity fanovana nataon'ny filoha ity: 1.) hampiakatra ny fitokisana ny governemanta izay nifindran'ny tsikera nahazo an'i Segura koa sy 2) hampanginana ny tsikera avy amin'ny tsy miankina mahazo ny governemanta, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny angovo. Luis José ao amin'ny Ahí e’ que Prende [es] no nitodika tany amin'ny fanendrena:
Inona ny dikan'ny fanendrena an'i Celso Marranzini any amin'ny fitantanana ny CDEEE? fihatsaram-belatsihy io, hanasa tanana (ny governemanta) ka natolony tany amin'ny tena mpitsikera azy indrindra ny resaka mahafatin'ny angovo: ny sehatra tsy miankina.
Voatery hitony sy hangina, manomboka izao, ny ao amin'ny sehatra tsy miankina rehefa notendrena ny olo-malazan'ny fandraharahana sady itokisan'ny ankamaroan'izy ireo, satria raha mbola mitaraina amin'ny fahatapahan-jiro ry zareo dia tsy mitsikera ny tompon'andraikitra hafa fa mitsikera kosa ny andriana Celso Marranzin, olona nanana fisondrotam-piainana nampitsiriritra ny maro.
Hiasa mafy izany izao i Celso Marranzini, izay fatra-pitsikera an'i Segura sy henjana nanoloana ny governemanta , fa tsy maintsy ho tsara fitantanana raha tsy te-ho voahombo.
Mifangaroharo be ihany ny fihevitry ny olona amin'ny ankapobeny mikasika ny lazan'i Marranzini ary maro sahady ny mieritreritra fa ho voavaha ny olan'ny angovo. Misy kosa ireo tsy resy lahatra ary mitsikera ny fomba nahatongavany teo amin'ny toerana. Nampiditra ny “Tetik'i Celso” hahazoana toeram-pitantanana ambony eo amin'ny sehatra ara-panjakana i Rafael Pérez of Duarte 101 [es]: Mitsikera tompon'andraikitra iray hatrany – indrindra fa mitombina izy ireny – mandra-pahaleo ny filoha, esorina ny voatsikera, dia maka ny toerany avy eo. Nandeha lavidavitra kokoa i Marino, mpamaky iray ao amin'ny Ahí e’ que Prende [es]:
Ankehitriny ary dia fanontaniana tokana ihany, heverina fa efa mahalala ny Injeniera Radhames Segura isika, fa iza kosa no mahalala ny MPANGALATRA, Celso Marranzini, izay nivarotra angovo tamin'ny alalan'ny orinasany TSY ARA-DALANA tamin'ny vidiny mahatratra 200%-n'ny vidiny ividianany azy… ary dia izy ankehitriny no filohan'ny vondron'asa NOBAKIANY ROMPITRA… inona moa izany ny olana ho voavahan'io tigra (Marranzini) io?
Rehefa nesorina teo amin'ny fitantanana ny CDEEE i Segura dia notendren'ny filoha Fernández ho mpanolo-tsainan'ny governemanta eo amin'ny sehatry ny angovo. Saingy nolaviny izany toerana izany ary nambarany ampahibemaso fa hanoka-tena ny lehilahy hanadio sy hamerina ny laza tsarany.